Iyo nyowani vhezheni ye Endless OS 3.5.4 yakatoburitswa kare | Linux Vakapindwa muropa
Iyo itsva vhezheni yeEndless OS 3.5.4 yaburitswa
Endless OS ndeye yemahara inoshanda sisitimu yakagadzirwa neEndless Makomputa, OEM iyo yakakwanisa kuunza yayo Linux inoshanda sisitimu kune ruzhinji nekutumira iyo pre-yakaiswa pane akawanda malaptops.
Este Iyo yakasimba uye yakapusa inoshanda sisitimu iyo inofambisa kushandiswa kwetekinoroji kune vashandisi vayo uye inounza ruzivo chero kupi. Kugoverwa kweLinux kune akateedzana mafomu akatangirwa kare, anodarika zana ekushandisa ayo atinogona kuvimba nawo nekukasira mukugovera uku.
Kugovera inopa vashandisi vako ruzivo rwakareruka uye rwakareruka rwevashandisi uchishandisa GNOME 3 forked tsika desktop desktop, kunze kweizvi, kugovera uku kune shanduro mbiri: Lite uye Yakazara.
Yokutanga Inokurudzirwa kune avo vanowana mukana wekupinda muInternet uye zvinogona kuitwa nezvishandiso zvinopihwa chero nguva uye kune rimwe divi iro Rizere iro nderevaya vasina Indaneti uye izvi zvinosanganisira mapakeji ese anopiwa ne system.
Endless OS yakavakirwa paGNOME iyo iyo yaakakwanisa kuumba yayo yega interface yeiyo system, iyo inopihwa kune vashandisi kufambisa kushandiswa kwesisitimu kune vatsva vanoshandisa Linux.
Pakumisikidza Endless OS, vashandisi vanokwaziswa nedhirowa reapp kubva kwavanogona kutanga nekukurumidza izvo zvavanoda
Iyo inoshanda sisitimu yakagadzirirwa kushanda zvese online uye isingaenderane uye iwe uchave unokwanisa kuisa chero imwe application yaunogona kufunga nezvayo.
1 Chii chitsva muEndless OS 3.5.4
2 Dhawunirodha uye edza Endless OS 3.5.4
Chii chitsva muEndless OS 3.5.4
Mukuburitswa kutsva kweEndless OS 3.5.4 a yezvinyorwa zvitsva izvo izvi zvinounza shanduro ndiwo matsva ekudzora kwevabereki emaapp.
Nayo izvo zvino vashandisi ikozvino ivo vanogona kudzora mashandiro ayo anogona kuiswa kana kuvhurwa nevakajairwa vashandisi.
Izvo izvo mushandisi anogona kuseta anotevera madhiraini aripo:
Chengetedza zvikumbiro zvinowanikwa munzvimbo yekushandisa zvichibva pahuwandu hwehuwandu hwavo
Mitambo yemhirizhonga yemavhidhiyo haizoonekwe mukati mekushandisa kwepakati.
Kugona kudzora kupinda kune mamwe maapplication akatoiswa pasisitimu.
Semuenzaniso, kana sarudzo ikaiswa kuratidza matatu-makore-ekukura maapps akakodzera, mitambo yechisimba yemavhidhiyo haizoonekwe munzvimbo yeapp.
Mune iyi vhezheni yekutanga yechinhu, kupinda kune zvishandiso zvakatobatanidzwa muhurongwa hazvigone kutariswa kwenguva pfupi, iyo inosanganisirwa neWebhu browser, maneja wefaira, mhariri yemavara uye vhidhiyo inoridza.
Asi timu yebasa inoti vanotarisira kuishandisa mune ramangwana vhezheni yeEndless OS.
Imwe pfungwa yakakosha yekusimbisa nezve kuvhurwa kwechishandiso ndeyekuti kukurumidza midhiya kutamba kwakawedzerwa kuhurongwa.
Nezvo pane akawanda mapuratifomu eIntel, Endless iye zvino anogona kushandisa isiri-browser Hardware yakamhanyisa vhidhiyo kudhizaina, kana ichitsigirwa nekombuta, uye kana kuwedzerwa kuchidikanwa, kunoiswa kubva kuFlathub.
Chekupedzisira, imwe pfungwa yakakosha yekusimbisa nezve kuvhurwa uku kwekuparadzirwa yaive yekuti iko kugovera kwakakwaniswa kuverengerwa mu "hack Computer", iko zvino avo vanowana iyi michina vachakwanisa kusarudza iyo system zvekuti inosvika yatove kuiswa pane yavo midziyo.
Dhawunirodha uye edza Endless OS 3.5.4
Kune avo vanofarira kukwanisa kurodha iyi nyowani vhezheni yekuparadzira, isai iyo kana kuyedza mumushini chaiwo Iwe unogona kuenda wakananga kune yepamutemo webhusaiti yeiyo purojekiti uko iwe kwaunogona kuwana iyo system mufananidzo mune yayo yekurodha chikamu.
Kukura kwe Iyo iso mufananidzo weLite vhezheni ndeye 1.73 GB saka 2GB USB inokwana.
Panguva ye Iyo ISO mufananidzo weiyo Yakazara vhezheni muSpanish iri 15.4 GB uye nekuda kweizvi iwe uchada 16GB USB.
Iwe unogona kusevha iyo mufananidzo nerubatsiro rweEtcher pane USB.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Iyo itsva vhezheni yeEndless OS 3.5.4 yaburitswa
Q2VKPT: mutambo unobva paQuake 2 nerutsigiro rweVulkan API
Red Hat inobvisa MongoDB kubva kuRHEL 8 uye Fedora nekuda kweiri rezinesi reSSPL